Quite Low ruzha mhando - China Ningbo Hicon Industry
Dana Us: 0086 574 62132957
Mumapepa Air conditioner
Rooftop mumapepa AC
Air dzaserera Split mutsinga dzinofamba nemukaka kutaipa AC
Air haachandidi mvura Chiller
Water haachandidi Water Chiller
Mupumburu Water Chiller
Zvikazara sikuruwa Water Chiller
Mvura Air kupisa pombi
Mvura mvura kupisa pombi
Hot Air Source Total Heat Recovery Water hita Unit
Indoor pool AC chikwata
Air dzaserera Floor Standing AC
Water haachandidi Unit
Water haachandidi mumapepa AC
Base chiteshi unotonhorera chikwata
Crane Cab Nzvimbo Unit
Split Wall hwavapo chikwata
Akatsemura Ceiling akatasva chikwata
High waivako Crane A / C chikwata
Low-Temp mvura chiller
High- Temp mvura chiller
Marine & pemvura HVAC
Nhuri AC Unit
Air dzaserera Self ine AC
Water dzaserera Self ine AC
Air haachandidi mumapepa AC
Urongwa Condensing Unit
Unit Air Nzvimbo
mutsinga dzinofamba nemukaka hita
Chinjikira Kusakwana Unit
Chinjikira Anofumurwa Unit
Vertical yakavanzwa Unit
Mira Anofumurwa Unit
Wall hwavapo Unit
Ceiling Kusakwana Unit
Ceiling Anofumurwa Unit
Quite Low ruzha mhando
Marine Ceiling chakavanzika Fan coils Unit Hisurp akaita rakagadzirirwa dzino siyana Fan Coil Unit kuitira munhu mhepo mukuru-mugiredhi pasi zvomumvura kwezvakatipoteredza. Kubva makuru maduku nezvikepe zvavatengesi, akasiyana mhando anowanikwa mafomu, kugutsa zvakawanda zvaida kutonhora kugona uye manyuko simba rinoshandiswa pose. nzvimbo iyi nyanzvi unyanzvi kunoita Hisurp anotungamirira kumucheto mumunda ichi dzebhizimisi. Izvi chinjikira zvakavi- dzinoshandisa coils dzakatevedzana yambokurukurwa kuti, ac ...
Marine Ceiling chakavanzika Fan coils Unit
Hisurp akaita rakagadzirirwa dzino siyana Fan Coil Unit kuitira munhu mhepo mukuru-mugiredhi pasi zvomumvura kwezvakatipoteredza. Kubva makuru maduku nezvikepe zvavatengesi, akasiyana mhando anowanikwa mafomu, kugutsa zvakawanda zvaida kutonhora kugona uye manyuko simba rinoshandiswa pose. nzvimbo iyi nyanzvi unyanzvi kunoita Hisurp anotungamirira kumucheto mumunda ichi dzebhizimisi.
Izvi chinjikira zvakavi- dzinoshandisa coils dzakatevedzana yambokurukurwa kuti vawane kunonyanyisa nyaradzo pamwe kunonyanyisa simba waivako mune ruzha kashoma kuwana pamwe kwakajairika mhepo inouraya anokwana zviyero (paradzanisa, dzinoshandisa Coils). waivako Its anoita yakanaka chigadzirwa upi chokugadza chinoda zvaidiwa mitemo yakaomarara pamusoro ruzha mumatunhu. The Kunyatsodzidza imwe plenum revatema suppressor uye kushandisa imwe insulating zvinhu (zvishandiswezve polyester faibha) yakakwirira inzwi kuchipedza simba.
Excellent mukurumari zvikuru akagadzirirwa marina mafomu
Light uremu patani
Wide oparesheni dungwerungwe
nadzurudzo zhinji nhengo chokwadi mafomu siyana
zvokufambisa nyore uye basa chokugadza
Stainless Steel donhwe pani pamwe 25mm nokukwirira
- zvikepe All zvisinei zvitsva kana akwegura
- duku vezvikwata kuti kabhini uye injini mukamuri
Previous: munhuwo Type
Next: Floor Standing
Marine mumapepa Fan Coil Unit